"Dabeecadaha Nabad-diidka Waa Qaylo" Fawsiya Cabdi - Cakaara News
Northern Europe (CakaaraNews) Shabakada CakaaraNews oo indha-indhaynaysa tadawurka siyaasadeed ee ay ku jiraan Jaaliyadaha Degaanka u dhashay ee ku nool dalalka Waqooyiga Europe ayaa waxay baadhitaankeeda ku heshay in kooxaha Nabad-diidka ee ku nool dhiiga shacabka ay ku amar-ku-taagleenayaan inay bulshada nabada jecel ugu hanjabaan si ay uga joojiyaan ka qayb-galka shirarka ay la galayaan Wafdiga ka socda DDS.
Maxamed Cali Faarax oo degan magaalada Gotenberg ee dalka Sweden ayaa noo sheegay inuu kharash badan u soo galay oo uu shaqadiisii uga soo fasax qaatay si uu uga qayb-galo shirkan "Waxaan la yaabanahay, dadkan doonaya inaan waxba la ogaanin oo lagu jiro war la'aanta". Maxamed Cali wuxuu si adag u cambaareeyay ururada nabad-diidka siiba waxa uu ugu yeedhay UBO oo uu sheegay inay mindiyo iyo hanjabaad ka dhex wadaan bulshada. "Dadka waxay ugu hanjabayeen waxaanu qalaynaa ama gawracaynaa ilmahaaga", cajab. "Nasiib wanaag anigu ma lihi wax caruur ah, balse hanjabaadooda waxba iga qaadi mayso.
Dhinaca kale, Fawsiya Cabdi Goondheere oo iyadu noo sheegtay inay ka timid magaalada Malmo ee dalka Sweden ayaa sidoo kale cambaarayn iyo canaan kulul u soo jeedisay ururada raba inay bulshada qurbo-joogta ah ka hor-istaagaan ogaanshaha waxa ka socda dolkooda hooyo. "Walaahi ma moodayn mana ogayn in Degaanka Soomaalida uu horumar intan gaadha ka hirgalay" ayay tidhi Fawsiya kadib markay dhamaysatay daawashada Filim Xogeed ka waramayay xaalada Dhaqan-Dhaqaale ee Degaanku ku sugan yahay. Sida ay gabadhani qabto Ururada nabad-diidka waxa ay ku adeegtaan dhalinyaro nolosha ka dhacsan oo qaab-nololeedka Yurub ama reer Galbeedka ka soo bixi waayay oo maqsinada jaadka garaabada ku ruuga kombiyuutarna dul-fadhiya oon ogayn xaalada dhabta ah ee dhulkiisa uu ku sugan yahay. "Waxaan jidhidhicooday kolkaan filimka ka arkay hablaha xijaaban ee ka qalin jabiyay Jigjiga University" ayay tidhi Fawsiya.
Dhamaan shacabka ilaa maanta ka qayb-galay shirarkii goos-gooska ahaa ee wafdiga ka socda DDS uu kula lahaa magaalada Stochkholm ayaa waxay muujinayaan inay fikirkoodii hore ee ay ka qabeen Degaanka Soomaalida uu wax wayn iska badalay. Waxay isku wadfa waafaqsan yihiin in la gaadhay xilligii "begining of the end" ee ururada nabad-diidka. Waxay tusaale u soo qaateen in garoonka maanta ciyaartu ka taagan tahay ay tahay godadkoodii Yurub oo la isla soo dhaafay Huuraale iyo qabalee danbe oo ay ku meerasytaanba.
"Beentu way hadhi Runtuna way socon" ayuu yidhi Mahad Cabdicasiis oo isagu dagan dalka Iceland, balse ka soo qayb-galay shirkan. "Waligay kama fikirin in ONLF ay been intaa le'eg, muddadaas oo dhan ay nagu haysatay. Waxay naga dhaadhicisay xitaa iskuul kama dhisna. Walaahi ilmo ayaa indhahayga ka soo yaacday kolkaan arkay aqoonyahaniinta da'da yar ee sida hagar la'aanta ugu adeegaya shacabkooda". Mahad oo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi "Tuugta odayaasha, islaamaha iyo dib-jirka aan waxba baran isagoo Yurub jooga ee drugs iyo irbad ka shaqeeya, muxuu afka ugu taagi, kuwa iyagoo Afrika jooga intay Master Degree iyo PHD karaankkoda ku qaatay u shaqaynaya shacabkooda." "Walaahi waa nabad-diidku waa nolol-diid" ayuu ku soo gabagabeeyay Mahad.